Fivarotana toaka : Nolavina avokoa ny fanomezan-dalana -
AccueilRaharaham-pirenenaFivarotana toaka : Nolavina avokoa ny fanomezan-dalana
Fivarotana toaka : Nolavina avokoa ny fanomezan-dalana
Efa diso tafahoatra loatra ny isan’ireo “bar” na ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola eto an-drenivohitra kanefa maro amin’izy ireo no tsy ara-dalàna. Tafiditra ao anatin’izay tsy fanarahan-dalàna izay, ohatra, ireo mpivarotra toaka tsy manana taratasy fahazoan-dalana hivarotra avy amin’ireo rafitra mahefa voakasik’izany sy ireo tsy mandoa hetra. Noho izay fahamaroan’ny fivarotan-toaka izay dia nolavina avokoa ny fangatahana fanomezan-dalana tamin’ity taona 2017 ity.
Maniry ohatran’ny anana
Manana olana amin’ny fivarotana toaka ny sampan-draharaha misahana ny fanomezan-dalana momba izany noho ny, firoboroboan’ ity seha-pihariana iray ity, izay lasa feno mpivaro-toaka tsy ara-dalàna. Raha ny tsikaritra, tsy ireo trano famarotana sy fisotroana zava-pisotro misy alikaola eny amoron-dalana ihany no misy tsy manara-dalàna fa feno azy ireo avokoa any anaty elakelan-trano rehetra any, izay maniry ohatra ny anana hoy ny fomba fiteny. Araka ny antontan’isa avy amin’ny talem-paritra ny hetra etoAnalamanga, ny Inspektiora, Randriamanantena Armand Colin, tafakatra hatrany amin’ny 60 hatramin’ny 70 isan-jato ny tahan’ny fivarotan-toaka tsy ara-dalàna eto an-drenivohitra ny taona 2016.
Voafetra amin’ny isan’ny mponina
Vokatra saropady ny toaka, ary tena poizina ho an’ny mponina. Ankoatra ny fahasimbana ara-pahasalamana mantsy, isan’ny miteraka tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa ny toaka. Ary amin’ny maha-saropady azy izay, voafetra amin’ny isan’ny mponina ny fivarotana toaka, araka ny fanazavana azo tamin’ny Inspektiora, Randriamanantena Armand Colin, talem-paritry ny hetra eto Analamanga. “Isan’ny vokatra manimba ny fiaraha-monina ny toaka. Amin’ny maha-saropady azy, voafetra amin’ny isan’ny mponina ny fivarotana toaka. Izany hoe, tokony ho “bar” iray isaky ny mponina 1 500. Ankoatra izay, tsy tokony hifanakaiky ny mpivaro-toaka ara-dalàna, fa tokony hanana elanelana eo amin’ny 150 metatra fa raha tsy izany, tsy maintsy hakatona ilay nahazo alalana farany”, hoy hatrany ny fanazavana.
Olana ny fametrahana entana giazina
Tsy mipetra-potsiny ny fitondram-panjakana manoloana ireo fivarotan-toaka tsy manara-dalàna be dia be eto an-drenivohitra sy ny manodidina fa efa misy hatrany ireo fepetra noraisina araka ny voalaza ao anaty lalàna izay mbola manankery mandrak’ankehitriny. Isan’izany ny fanaovana fisavana ireo “bar” tsy manara-dalàna miaraka amin’ny mpitandro filaminana ary ny figiazana ireo entana heverina fa poizina saingy mbola olana atrehin’ny tompon’andraikitra amin’ny toerana hametrahana ireo entana giazina. Mbola olana iray lehibe ihany koa fihatsiana ady ataon’ireo tompona fivarotana toaka, amin’ny alalan’ny fikaramana jiolahim-boto ka lasa mampihemotra ireo tompon’andraikitra amin’ny asany. “Betsaka tokoa ireo tompona fivarotana toaka tsy manara-dalàna no tsy manaiky hanaovana fisavana sy tsy manaiky higiazana ny enta-barotra. Tranga iray efa nisy izao tany Mahitsy. Naleon’ilay tompona “bar” nanakarama jiolohim-boto nisotro ny toaka rehetra tao aminy. Ireto farany indray avy eo rehefa mamo, namaky ny tavoahangy rehetra tao handeha hamonoana ireo ekipanay sy ny mpitandro filaminana izay saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka mihitsy”, hoy hatrany ny talem-paritra ny hetra eto Analamanga, Inspektiora Randriamanantena Armand Colin.
Miteraka fatiantoka amin’ny toe-karena
Tsy eo amin’ny kitapom-bolam-panjakana ihany fa miteraka fatiantoka lehibe eo amin’ny toe-karenan’ny firenena ihany koa ny firoboroboan’ny fivarotana toaka tsy ara-dalàna. Lasa misy fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin’ireo mpivarotra manara-dalàna sy ireo tsy manara-dalàna satria afaka mivarotra mora ny entany ny tsy mandoa hetra. Nefa ny lamandy aloan’ity farany tsy mahavita ny volam-panjakana akory, raha iray alina isaky ny litatra no alaina talem-paritra ny hetra Analamanga aminy, araka ny voalaza hatrany. Marihina fa hetra tambatra no aloan’ireo tompona “bar”, izay 5 isan-jaton’ny vola miditra. Fantatra moa fa vola manodidina ny 17 lavitrisa Ariary ny hetran-toaka niditra teo amin’ny talem-paritry ny hetra Analamanga tamin’ny taona 2016 ary vinavinaina hiakatra 20 lavitrisa Ariary izany amin’ity taona ity.
Manome vahana ny mpivarotra toaka ankalamanjana
Ankoatra ny fivarotana toaka tsy ara-dalàna eny anelankelan-trano eny, isan’ny mirongatra ihany koa ny fivarotana toaka ankalamanjana isaky ny zoma alina sy ny faran’ny herinandro, toy ny eny Analakely, Tsaralalana, Mahamasina, By pass, Ambohimangakely, Talatamaty, sns. Na dia efa betsaka aza izy ireny no sarona sy nahazo fampitandremana avy amin’ny tompon’andraikitra dia mbola mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fisehoana ankalamanjana. Ny olana anefa, sarotra ny fanaraha-maso ny fidiran’ny hetra na eo amin’ny mpividy na eo amin’ny mpivarotra ka lasa manome vahana ny tsy ara-dalàna sy ny gaboraraka, ka mampihena ny fidiram-bolam-panjakana satria tsy misy faktiora eo amin’ny fifanakalozana. Ary raha izay rehetra izay, tsikaritra fa isan’ny seha-pihariana maha-be fakam-panahy sy kolikoly ny fivarotana toaka.
Nolavina ny fanomezan-dalana rehetra
Feno fivarotana toaka eto Antananarivo, ary tsy manara-dalàna ny ankamaroany. Noho izany dia hentitra ny talem-paritry ny hetra Analamanga amin’ny fandavana ny fanomezana alalana ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola. Araka ny fanazavana voaray, mahatratra aman-jatony ny fangatahana voarain’ny sampan-draharaha misahana fanomezan-dalàna ny fisokafana fivarotan-toaka ao anatin’ny taona iray. Fa noho ny fahafenoan’ny “bar” eran’ny tanàna izay, nolavina avokoa ny fanomezan-dalàna tamin’ity taona 2017 ity. Marihina moa fa, mandalo dingana maro ny olona iray maniry hanokatra “bar” vao mahazo izany alalana izany. Isan’izany ohatra, ny mombamomba ilay olona, misy ny fanaovana fanadihadiana ara-pitondran-tena ataon’ny pôlisy sy ny zandary, jerena ao anatin’izany na efa na mbola tsy nigadra ilay olona. Rehefa avy eo, misy fidinana ifotony atao hijerena ilay toerana eritreretina hanokafana ilay fivarotana toaka, sy ny maro hafa, izay vao mahazo an’ilay alalana.
Laurena Nany & Anna
Voafaritry ny kandidà Marc Ravalomanana, fa anio no hisaorany ny mpifidy azy rehetra, etsy amin’ ny kianjan’Ambohijatovo. Ny fisaorana sy fankasitrahana ny mpifidy izay be mpanao amin’ ny tany demokratika, ary maro ihany koa ireo ...Tohiny
Andry Rajoelina : Hamitaka fanindroany !